တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေရင် ဝိတ်ကျနိုင်သလား - Hello Sayarwon
တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေရင် ဝိတ်ကျနိုင်သလား
တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေတယ် (Masturbation) ဆိုတာဟာ အမျိုးသားတွေရော အမျိုးသမီးတွေပါ တစ်ကိုယ်တည်းရှိနေပြီး လိင်စိတ်ဆန္ဒ ရှိနေချိန်မျိုးမှာ ပြုမူတတ်ကြတဲ့ လိင်အပြုမူတစ်မျိုးပါ။ လူတိုင်းနီးပါး အာသာဖြေခြင်းကို အသက်အရွယ်တစ်ခု ရောက်ရင်လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
အာသာဖြေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမှား၊ အမှန်တွေ အမျိုးမျိုးရှိကြပေမယ့် တကယ့်အဖြစ်မှန်ကတော့ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေတယ်ဆိုတာဟာ လူ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထဲက ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာနည်းပါးတဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေတာကို အပြစ်ကြီးတစ်ခုလို ရှုမြင်တတ်တဲ့ အယူအဆမျိုးရှိကြသလို မကောင်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကျူးလွန်သလို ရှုမြင်ကတာမျိုးလည်း ရှိနေကြဆဲပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အာသာဖြေတာကို ရှောင်လွှဲပြီးနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေရယ်လို့ မရှိသလောက်ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသားတွေမှာပေါ့။
Masturbation လုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ၊ အယူအဆတွေထဲမှာ အာသာဖြေတာက ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိထားပေမယ့် ဆေးသိပ္ပံနည်းနည်းနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ချဉ်းကပ်ကြည့်ကြရအောင်။
သေချာတာကတော့ အာသာဖြေရင် အိပ်စက်လို့ကောင်းတယ်၊ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျတယ်၊ စိတ်ခံစားချက်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဝိတ်ကျတယ်ဆိုတာကတော့ တကယ်မှန်ရဲ့လား? ကယ်လိုရီတွေကို အာသာဖြေခြင်းကနေတဆင့် လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သလား?
အာသာဖြေခြင်းဟာ ကယ်လိုရီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်ထားသလောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပျမ်းမျှပြောရမယ်ဆိုရင် တစ်ကြိမ်အာသာဖြေရင် ကယ်လိုရီပမာဏ ၅-၆ လောက်ကိုပဲ လောင်ကျွမ်းစေနိုင်တာပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ်က မြန်မြန်ပြီးမြောက်လေလေ လောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ ပမာဏနည်းလေလေပါပဲ။
အထွတ်အထိပ်ရောက်မှု၊ ခက်ခဲမှု၊ အချိန်ကြာမှုနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေပေါ်မူတည်မှာဖြစ်ပေမယ့် အလွန်ဆုံး လောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ ပမာဏက ၁၀ ကယ်လိုရီသာဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာချက်တွေကဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာဟာ ဝိတ်ကျစေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကယ်လိုရီတွေ ပိုပြီးလောင်ကျွမ်းအောင် လုပ်လို့တော့ရပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါ နည်းစနစ်တွေကို လိုက်နာဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
လက်ချောင်းတွေကို ပိုပြီး မြန်မြန်နဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ရှားတာ၊
စိတ်ခံစားမှုပိုကောင်းမွန်စေဖို့ Toy တွေ အသုံးပြုတာ၊
ကိုယ်အနှစ်သက်ဆုံး နေရာ၊ အခြေအနေကို စမ်းသပ်ရှာဖွေပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝအရအောင်ဖန်တီးတာမျိုးတွေကို ပြုလုပ်ဖို့ပါပဲ။
လူတွေက တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရင် ကယ်လိုရီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်မယ်လို့ ရှုမြင်ကြရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကယ်လိုရီ အမြောက်အများကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်တာကြောင့် ဆက်စပ်ပြီး တွေးတောလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် ၁၇၅ ပေါင်ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ အိပ်ယာပေါ်မှာ မိနစ် ၄၀ ကြာ လိင်မှုကိစ္စကို စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကယ်လိုရီ ၂၀၀ လောက်ကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။
မိနစ် ၄၀ ကြာ အာသာဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ လက်ညောင်းပြီး ဒူးချောင်တာသာ အဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။ လိင်ဆက်ဆံတာလောက်တော့ ကယ်လိုရီတွေကို လောင်ကျွမ်းမပေးနိုင်ပါဘူး။
ဒါဆို အာသာဖြေရင် ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှ မရဘူးလား
အာသာဖြေလို့ ကယ်လိုရီတွေ များများ မလောင်ကျွမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ တခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတော့ ရစေနိုင်တာကို မမေ့ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြည်တဲ့အခါ အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်ပါတယ်။
အာသာဖြေခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း ပိုသိလာစေနိုင်တယ်
လိင်ခံစားမှု အထွတ်အထိပ်ရောက်ဖို့ အတွက် အမြန်ဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်တယ်
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို လျှော့ချပေးတယ်
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိတ်ပင်ပန်းတာတွေကို ဖြေလျှော့ပေးနိုင်တယ်
စိတ်ကျရောဂါ မဖြစ်အောင် တားဆီးပေးနိုင်တယ်
ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူပေးတယ်
လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေကိုလည်း ဟန့်တားပေးရာ ရောက်တယ်။
ဒါကြောင့် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့အခါ ကယ်လိုရီ အနည်းငယ်ကိုသာ လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပေမယ့် တခြားကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ များတယ်ဆိုတာ သိနားလည်ထားစေချင်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း နဲ့ ကျန်းမာရေး